Ufuna ubulungiswa ngokufa kwendodana | News24
Ufuna ubulungiswa ngokufa kwendodana
UUNINA womfana owabulawa ngesihluku endaweni yaKwaMpumuza ukhala ngamaphoyisa awasola ngokuyekethisa umthetho ecaleni lokubulawa kwendodana yakhe. UKwanele Mokatsoane, nowayeneminayaka eli-17, washaywa waze washona amalunga omphakathi ngenyanga kaNdasa (March) kulo nyaka ngemuva kwengxabano okwakubangwa kuyona imali engu-R7. UNks Gugu Mokatsoane ongunina kamufi, uthi angeke aze akuthole ukuphumula kuze kuba ubona abantu ababulala ingane yakhe bebhadla ejele.
Ngokusho kuka Nks Mokatsoane, uKwanele kunezimpahla ayezithathe kubo wahamba wayozidayisa kanti umnikazi wazo uzohamba ayozilanda kumuntu lowo azidayise khona. “Umuntu owayedayiselwe izimpahla wabe esefuna imali yakhe kuKwanele nokuthiwa wamkhokhela kodwa kushoda u-R7. Ingxabano sisola ukuthi yaqala lapho ke njengoba wagcina eseshaywa amalunga omphakathi nje waze washona. Ayikho into ababengamshayi ngayo, abanye izinduku nezipeti kanye namatshe. Indlela ayelimele ngayo ithambo lomgogodla lalihlephukile, amehlo exhafakile, izincwane nazo zigengciwe. “Angikaze ngisibone isihluku esifana nalesiya engasibona enganeni yami. Noma kungathiwa wayenzeni akekho umuntu onelungelo lokubulala omunye ngalesiya sihluku,” kubeka yena. Uqhube wathi okumphatha kabi kakhulu ukuthi banawo ama-video ngesikhathi kushaywa kubulalwa indodana yakhe.
“Abantu abashayayo bayabonakala kodwa futhi ababoshwa. Ngihlala nabo endweni, sithenga esitolo esisodwa, sigibela itekisi eyodwa. Kwesinye isikhathi ngize ngicabange ngisho ukuziphindiselela ngethemba lokuthi hlampe nami ngizothola ukuthula okanye ngizothobeka amanxeba.
“Kungafanele kuboshwe kwamina ke manje ngoba kubuhlungu ukubona abantu abakubulalela ingane behamba becanasa ngaphandle ekubeni wena ingane yakho ishonile. Sengizamile ukulilandelela lolu daba emaphoyiseni ngaze ngakhathala ngoba angiyitholi impendulo eqondile ukuthi kungabe kwenzakalani ngecala. Akukho ngisho umuntu ofikayo kumina azongazisa ukuthi yini eyenzakalayo. Angisazi mina ukuthi kumele ngenzeni kanti noma kuze kubulawe abantu abangaki ukuze amacala ethu anakwe,” kubeka yena. Imizamo yokuthola amaphoyisa ase Mgungundlovu ayiphumelelanga.